Warbixin: Ciidanka Itoobiya oo baxsad ka ah Bakool dagaal culusna la galay Macawiisley – Hornafrik Media Network
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeyay ciidamo Itoobiyaan ah iyo Maleeshiyada hubeysan ee Macawiisley uu ka dhacay tuulada Af- qurun oo qiyaastii 48KM u jirta deegaanka Far Libaax ee gobolka Hiiraan.
Sida wararku sheegayaan dagaalka ayaa ka dambeeyay kaddib markii ciidamo Itoobiyaan ah oo ka soo gudbay xadka u dhaxeeya gobolada Bakool iyo Hiiraan ay ku soo dhaceen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada Maleeshiyada Macawiisley.
Dagaalka ayaa la sheegay inuu ku bilowday kala shaki, markii ciidanka Itoobiya ay soo galeen goobo ay difaac uga jireen dagaalyahanada kooxda Macawiisleyda.
Dagaal qaatay saacado ayaa labada dhinac ku dhex maray banaanka tuulada, waxaana la sheegayaa in ay ku dhinteen in ka badan 15 ruux oo labada dhinac isugu jira, halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay, si ay xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah.
Ciidamada Itoobiyaanka ah ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwo baxsad ah oo ka soo goostay saldhig militeri oo ku yaalla duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool, halkaas oo sida la sheegay mudo ku dhaw sanado ay ugu go’doonsan yihiin ururka Al-Shabaab.
Xilligaas ciidamada baxsadka ah waxay ku wajahnaayeen gobolka Hiiraan oo ay ku suganyihiin ciidamo kale oo Itoobiyaan ah, balse iyagoo ka baqaya Al-Shabaab ayey ka dul dheceen xero ciidan oo ay laheyd kooxda Macawiisley, dagaal adag oo ay kala kulmeen kadibna waxaa la sheegay in ciidamadaas ay u jaheysteen dhanka xuduuda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Saraakiil ka tirsan kooxda Macawiisley ee dagaalka la gashay ciidankaas waxay sheegeen in ku dhawaad 20 meyd ah ay goobta uga carareen askartii Itoobiya ee baxsadka aheyd, in kastoo aysan jirin cid ka madax banaan oo xaqiiji karta khasaarahaas.
Macawiisley waa koox xiriir la leh dowladda federaalka Soomaaliya waxayna ka dagaalamaan qeybo ka tirsan gobolada Bakool, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, dagaalkooduna waxa uu ku wajahanyahay Al-Shabaab.
8-dii bishan sidan oo kale laba askari oo Itoobiyaan ah ayaa ka baxsatay saldhig ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ay ku leeyihiin duleedka degmada Waajid ee isla gobolka Bakool.
Labada askari waxay baxsad u ahaayeen dalkoodii hooyo ee Itoobiya, waxayna Al-Shabaab ku dileen meel 5KM u jirta saldhigoodii Waajid, iyagoo sheegay in ay ka furteen seddax qori ooh al yahay AK47, labana tahay qoryaha shiishka badan ee loo yaqaano Shaamshuutay, sida lagu sheegay war xilligaas ay daabacday warbaahinta Al-Shabaab.
Degmooyin iyo deegaano dhawr ah oo ka tirsan gobolka Bakool waxaa fariisimo kuleh cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, xogta aan ka heynaana waxay sheegeysaa in quus ay taaganyihiin ciidankaas.
Gobolka Bakool ayaa ah kan ugu daray ee ku jira go’doonka Al-Shabaab, waxayna noloshu ku adkaatay ciidanka ka howlgala oo markii laga reebo kuwa Soomaalida inta kale ay tahay Itoobiyaan, waxayna hada ciidamadaasi bilaabeen in ay iskaga cararaan Bakool oo indhaha isku sii qabsanaysa go’doonka Al-Shabaab Awgiis.